သတင်း Archives - Page2of6- Channel Lover
ယနေ့ည လှည်းတန်းတွင် ပြုလုပ်နေသည့် ညသပိတ်မြင်ကွင်းများ
March 12, 2021 by Channel Lover
ယနေ့ည လှည်းတန်းတွင် ပြုလုပ်နေသည့် ညသပိတ်မြင်ကွင်းများ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ မိန့်ကြားချက်(ဆရာတော်ကြီး ပြောရင် ကွက်တိမှန်ပါတယ် ) ထိုင်းမှာ ကလေးလေးတွေ ဂူပိတ်မိတုန်းကလည်း ဆရာတော်ကြီးက ပြန်တွေ့လိမ့်မယိလို့ ပြောခဲ့တာ မှန်ခဲ့ပါတယ် အခုလည်း ဆရာတော်ကြီး စကားကို သေချာလိုက်နာပါ့မယ် အရှင်ဘုရား မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ မိန့်ကြားချက် သူ့ဘာသာသူ ယတြာဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း/အမိန့်ပြန်တမ်းဘယ်လောက်ပြင်းပြင်း စကြာဝတေးမင်းတောင် အမိန့်ပေးလို့မရတဲ့ နတ်မင်းကြီးနှစ်ပါးရှိပါတယ်။ (၁)လောကပါလ နတ်မင်းကြီး (၂)သာသနာစောင့် နတ်မင်းကြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ မိမိတို့ ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာ တစ်ခုခုပြု ပြီးတိုင်း “လောကပါလနတ်မင်းကြီး နှင့် သာသနာစောင့်နတ်မင်းကြီး ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေ စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေ ကိုယ်/စိတ်နှစ်ဖြာချမ်း သာစွာဖြင့် မိမိတို့ ခန္ဓာ့တာဝန်ကို သာသနာ့ဝန်ကို လွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ “လို့ (၃)ခေါက်ရွတ်ပြီး အထူး မေတ္တာပို့ပါ။ ပြီးလျှင် “မိမိဘဝမှာ … Read more
လူမမယ်ကလေးနဲ့ မီးနေသည်မိန်းမကိုထားခဲ့ပြီး အသက်ပေးသွားရရှာပြီ
လူမမယ်ကလေးနဲ့ မီးနေသည်မိန်းမကိုထားခဲ့ပြီး အသက်ပေးသွားရရှာပြီ ယောကျာ်းလို မထွက်တဲ့သူတွေများလာရင် ဒီမိုကရေစီ ဘယ်လိုရမလဲတဲ့ သေရင်တောင်တန်တယ်တဲ့ အဲ့တာကြောင့်သူထွက်ပေးတယ် လေးစားပါတယ်..မြောက်ဒဂုံသပိတ်မှာ ကျဆုံးခဲ့သူရဲ့ဇနီး မနက်ကလေ သူကနေ့တိုင်းထွက်ပါတယ်။မထွက်နဲ့လို့အတန်တန်ပြောပါတယ်သူ့ကို။ ကလေးလေးလည်း နောက်တစ်ယောက်ရှိနေသေးတဲ့အတွက် မသွားပါနဲ့လို့ပြောပါတယ်။ယောကျာ်းရေ မသွားပါနဲ့ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ဒုက္ခရောက်မှာဆိုပြီး အမြဲတမ်းပြောပါတယ်။ သူကမရဘူး သွားတယ်‌ နေ့တိုင်း။ သေရင်တောင်တန်တယ်တဲ့။ သူတစ်ယောက်မထွက်ရင် သူ့လိုလူတွေများသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့။သူ့လိုလူတွေများသွားရင် ဒီနိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီမရတော့ဘူးတဲ့။ ဒီမိုကရေစီမရမှာစိုးရိမ်နေတာ။ ခုကျတော့ဘာရလဲ။သူသေတာပဲအဖတ်တင်တာ။ အခု ကျွန်မတို့မှာ ကျွန်မ‌ယောကျာ်းအလောင်းတောင်မမြင်ရသေးဘူး။သေတာ အခုမမြင်ရသေးဘူး။အလောင်းကို ဆေးရုံခေါ်သွားလားလဲမသိသေးဘူး။ ဘာမှမသိရဘူး ။ဘာမှမသိရဘူး။ သူ့ကိုထွက်သွားမှာစိုးလို့လေ သူ့ကိုညီမအမြဲတမ်းတားတယ်။နင်ထွက်သွားရင် နင်ရဲ့နောက်ထပ်ကလေးလေးကိုငါမ‌မွေးပေးဘူး။မလုပ်ပါနဲ့မိန်းမရယ်တဲ့။ ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါတဲ့။ကလေးကိုလဲမလုပ်ပါနဲ့‌တဲ့။ တော်ပါတော့ တော်ပါတော့ ကျွန်တော် မပြောချင်တော့ဘူး။ဘာမှ မတော် ဘဲ ငိုရမယ် ဆိုတာ မတွေးထားဘူး ထပ်တူ ငိုရပါတယ် ညီမလေးရယ် 😭😭😭😭😭 … Read more
ပြည်သူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးလို့ မျှဝေပေးပါ(စာကိုဆုံးအောင်ဖတ်ပေးပါ⬇️⬇️⬇️)
ပြည်သူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးလို့ မျှဝေပေးပါ(စာကိုဆုံးအောင်ဖတ်ပေးပါ⬇️⬇️⬇️) စာကိုဆုံးအောင်ဖတ်ပေးပါ⬇️⬇️⬇️ အခုတစ်ချို့က 13,14ရက်နေ့ထိ ဆောင့်ကြည့်မယ် ဘာမုမထူးလာရင် ပြန်ချမယ် လုပ်နေတယ်နော် ဒါအရန်းအရေးကြီးတယ်နော် ပြန်ချမလို့လား ပြည်တွင်းစစ် လုပ်မလို့လား ကျနော် သိသလောက်တော့ ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ Democracy ရသွားတဲ့နိုင်ငံမကြားဖူးဘူးနော် ပြည်တွင်းစစ်မုာ ပြည်သူတွေ အနိုင်ရတယ်ဆိုတာ မကြားဖူးဘူးနော် ပြည်သူတွေသေတယ် လူအများကြီး နှစ်ကြာရှည် အဖမ်းခံရတယ် ဆိုတာပဲကြားဖူးတယ်နော် ဘာလို့လဲပြောပြမယ် အခုသူတို့သုံးနေတဲ့သေနတ်က တစ်ချက်ခြင်းစီလေးပျစ်နေတဲ့သေနတ်တွေသာသုံးသေးတယ် သူတို့ဒါအဖျားလေးပဲသုံးသေးဒါ တစ်ကယ် ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ရင် မင်းအောင်လိူင် တို့ဆိုတာ အာဏာရဖို့ဆို ကိုယ့်ပြည်သူကို တင့်ကားနဲ့ထု ဖို့လဲဝန်လေးနေမုာမဟူတ်ဘူး မြို့ပေါ ဗုံးကျဲ ချဖို့ဆိုလဲ ဝန်လေးနေမယ့် သူတွေမဟုတ်ဘူး သူက အာဏာရဖို့ အကုန်လုပ်မုာ အဲ့တော့ပြောပြမယ် ငါတို့ပြည်သူက သန်း၅၀ကျော်ရှိတယ် သူတို့က ၄သိန်းပဲရှိတယ် အဲ့လိုစကားက အရန်းဉာဏ်နည်းလွန်းအားကြီးတယ်ဗျ … Read more
ဒီနေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာ ဇနီးနှင့်သားကို အပြီးတိုင်စွန့်ခွါသွားခဲ့ရတဲ့ ကိုချစ်မင်းသူ
အိမ်ကထွက်ခါနီး ဇနီးသည်က တားတော့ “ငါမထွက်ရင်ငါ့လိုမထွက်တဲ့သူတွေများသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့” ဇနီးသည်ကိုချော့မော့ပြီး ရအောင်ထွက်ခဲ့တယ်။ အမေ့ဆီကလဲ မုန့်ဖိုး ၁၀၀၀တောင်းတော့ အမေကလဲ စိတ်မချလို့ သံပုရာသီး တစ်လုံး လွယ်အိတ်လေးထဲ အဆောင်သဘောမျိုး ထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်။ သမီးလေးကိုပွေ့ချီ နဖူးလေးကိုနမ်းပြီး အဖေပြန်လာမယ်နော်ဆိုကာ အိမ်ကနေထွက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူဒီနေ့ ပြန်မလာနိုင်ခဲ့ဘူး.. ချစ်ဇနီး၊သားသမီးနဲ့ မွေးအမေ တို့ကို အပြီးတိုင်နှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပြီ။ ဒီလိုမိသားစုနဲ့ စွန့်ခွါသွားရတဲ့သူတွေ ဘယ်လောက်တောင်ရှိနေပြီလဲ ဘယ်လောက်တောင် ထပ်ရှိလာအုံးမှာလဲ မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ဆုံး အေးချမ်းပါစေ အရေးတော်ပုံကြီး အမြန်ဆုံး အောင်မြင်နိုင်ပါစေ ဒီလိုမျိုးတွေ နောက်ထပ်မဖြစ်အောင် ရှယ်ပေးကြပါ unicode အိမျကထှကျခါနီး ဇနီးသညျက တားတော့ “ငါမထှကျရငျငါ့လိုမထှကျတဲ့သူတှမြေားသှားရငျဘယျလိုလုပျမလဲတဲ့” ဇနီးသညျကိုခြော့မော့ပွီး ရအောငျထှကျခဲ့တယျ။ အမဆေီ့ကလဲ မုနျ့ဖိုး ၁ဝဝဝတောငျးတော့ အမကေလဲ စိတျမခလြို့ သံပုရာသီး တဈလုံး … Read more
အလကား စားရတယ် ဆိုပြီး သဖြဲနဖြဲ စားခဲ့လို့ ဆေးရုံပါ ရောက်သွားတဲ့ သာကေတမှ ရဲ ၅၀ ကျော်
အလကား စားရတယ် ဆိုပြီး သဖြဲနဖြဲ စားခဲ့လို့ ဆေးရုံပါ ရောက်သွားတဲ့ သာကေတမှ ရဲ ၅၀ ကျော် တပ်မတော် ထောက်ခံ သူပါဟု လိမ်ညာပီး ကျွေး မွေးသော မုန့်ဟင်းခါးများ စားပီးနောက် ရဲ ၅၀ ကျော် ဝမ်းလျှော ဖြစ်စဉ်မှာ တနေ့မနက် အစောပိုင်းတွင် ဇင်ကမာလမ်းနှင့် ထူပါရုံ လမ်းထောင့် စိန်သုံးလုံး မုန့်ဟ င်းခါးသည် ဆိုင်ရှင်က မိမိကိုယ်ကို တပ်မတော် ထောက်ခံသူဟု ဆိုကာ တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိများအား ငါးမုန့်ဟင်းခါး အိုးဘဲဥဖြင့် လာရောက် သုံး ဆောင်ဖို့ ဖိတ်ကာ ကျွေးမွေးခဲ့ ပီးနောက်ထပ် ဖိလတ်ကာ ကျွေးမွေးခဲ့ ပီးနောက် နောက်ထပ် ရဲအယောက် ၅၀ ကျော် စာအတွက် … Read more
အသက်လုပြေးနေရတဲ့အချိန်မှာစားခဲ့ရတဲ့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ထမင်းတစ်နပ်
အသက်လုပြေးနေရတဲ့အချိန်မှာစားခဲ့ရတဲ့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ထမင်းတစ်နပ် မနက်ကပြေးရင်းလွှားရင် ကျူးကျော်ရပ်ကွက်ရောက်တော့ ပိတ်မိသွားပီ ဘယ်မှကူးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေရောက်သွားတယ် ဟိုဘက်ကူးတဲ့အပေါက်ကလည်းပိတ်ထားတယ် အဲ့ဒီကျူးကျော်ရပ်ကွက်မှာပဲခဏပုန်းနေခဲ့ရတယ် အဲ့အချိန်ကဗိုက်ဆာ အိပ်ရေးလည်းမဝ သူတို့ဖျော်တိုက်တဲ့ကော်ဖီသောက်ရတယ် နေ့လည်ရောက်တော့လဲ သူတို့ကပဲချက်ကျွေးတဲ့ထမင်းကိုစားခဲ့ရတယ် အသားတုပဲဟင်း၊ ငါးခြောက်ကြော်၊ ကြက်ဥကြော် ရယ် တကယ်အရသာရှိတယ် သူတို့မျက်နှာမှာလည်း စေတနာပီတိတွေမြင်ရတယ် ထမင်းစားပြီးတော့ လှဲပြီးနားချင်တဲအလွတ်လေးရှိတယ်တဲ့ နားကြမလားတဲ့ စိတ်ချပါ ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက်ကလုံခြုံပါတယ်တဲ့ သူတောင်းစား တွေပဲနေကြတာတဲ့ 😓😓 ဘယ်သူမှအဖက်မလုပ်ကြပါဘူးတဲ့ 😭😭 ဟုတ်တယ်ဗျာ ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေနေတုန်းကသူတို့ကို စောက်ဖက်တောင်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး ကျူးကျော်အာဝါဒီးတွေပဲလို့ တွေးခဲ့မိတဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ် တောင်ရွံမိတယ် သူတို့မှာကျွန်တော်တို့ထက်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားတွေအပြည့်အဝရှိတာ ဒီနေ့မြင်ခဲ့ရတယ် ကျွန်တော်တို့ကိုလာခေါ်ထုတ်ပေးတဲ့ကားလာတဲ့အချိန် မှာတော့ တိုက်အိမ်အကြီးကြီးပေါ်ကလူတွေရဲ့ယုတ်ညံမှုကိုလည်းမြင်ခဲ့ရတယ် ဂိတ်တံခါးလေးဖွင့်ပေးဖို့တောင်းပန်တာတောင်မဖွင့်ပေးခဲ့ဘူး နောက်ဆုံး အုတ်တံတိုင်းကိုကျော်တက်ခဲ့ရတယ်ခက်ခက်ခဲခဲ ဓားသွားဆူးကြိုးတွေအပြည့်တပ်ထားတဲ့အုတ်တံတိုင်းပေါ် ကြိုးနဲ့တွယ်တက် ဓားသွားတွေရှ ဖြစ်တဲ့အထိတက်ခဲ့ရတယ် အဲ့မှာကွဲကွဲပြားပြားသိလိုက်ရတာက စိတ်ဓာတ်တွေက မိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားကြတာပဲ အဲ့ဒီတံခါးမဖွင့်ပေးတဲ့အိမ်ကတော့ မှတ်မှတ်ရရ ငယ်ငယ်ကတည်းကသိတာ … Read more
ဖတ်နေရင်း ကြက်သီး ထရလောက်တဲ့ CDM လုပ်နေတဲ့ ဗိုလ်ကြီး ရှိန်းလင်း ရေးထားတဲ့ စာ
ဖတ်နေရင်း ကြက်သီး ထရလောက်တဲ့ CDM လုလပ်နေတဲ့ ဗိုလ်ကြီး ရှိန်းလင်း ရေးထားတဲ့ စာ ဖတ်နေရင်း ကြက်သီး ထရလောက်တဲ့ CDM လုလပ်နေတဲ့ ဗိုလ်ကြီး ရှိန်းလင်း ရေးထားတဲ့ စာ မဂ်လာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ နိုင်ငံအတွက် အသက်တောင် ပေးနိုင်သေးတာ CDM လုပ်လို့ထောင်ကျ တာကို ကြောက်နေရတာလားဆိုတဲ့ ဗိုလ်ကြီး ရှိန်းလင်း CDM လှုပ်ရှားမူထဲ ပါဝင်လာတဲ့ တပ်မတော်က ဗိုလ်ကြီး ရှိန်းလိန်းက သူ့ရဲ့လူမူ ကွန်ရက်မှာ ရေးထားတဲ့စာဖြစ် ပါတယ်။ ဗိုလ်ကြီး ရှိန်းလိန်းက ချင်းပြည်နယ် မင်းတပ်မြို့ဇာတိ ဖြစ်ပြီး တပ်မတော် ခြေလျင် တပ်ရင်းတစ်ခု မှာတာဝန် ထမ်းဆောင် နေသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ် “တပ်ထဲမှာ နေပြီး CDM … Read more
ယနေ့ဆန္ဒပြရာမှ ကျဆုံးသူများစာရင်း(အများကြီးပါလား) ယနေ့ မြို့ ၇ မြို့မှ ဆန္ဒပြသူ ၁၈ ဦး ကျဆုံး စစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့တို့၏ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိ မြို့ ၇ မြို့မှ ဆန္ဒပြသူ စုစုပေါင်း ၁၈ ဦး ကျဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ မြို့များမှ မျက်မြင်တွေ့မှုများကို စုစည်းကောက်ယူထားသော စာရင်းအရ သိရသည်။ ထိုသို့ သေဆုံးသူများအနက် ရန်ကုန်မြို့တော်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း(မြောက်ဒဂုံ)မြို့နယ်မှ နှစ်ဦး၊ မန္တလေးမှ တစ်ဦး၊ ပဲခူးမှ နှစ်ဦး၊ တောင်ငူမြို့မှ တစ်ဦိး၊ မြိတ်မြို့မှ သုံးဦး၊ မြင်းခြံမြို့မှ တစ်ဦး၊ မကွေးတိုင်း၊ မြိုင်မြို့မှ ရှစ်ဦးတို့ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ မြို့များတွင် အခြားသော အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရသူအချို့နှင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ … Read more
အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ထဘီတနျးအောကျကို ဝငျရငျ ဘုနျးကံ နိမျ့တတျပါသလား?
အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ထဘီတနျးအောကျကို ဝငျရငျ ဘုနျးနိမျ့တတျသလား? ” နိမျ့တယျထငျရငျ နိမျ့ပါတယျ ၊ မနိမျ့ဘူးထငျရငျ မနိမျ့ပါဘူး” ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ထဘီကွောငျ့ နိမျ့တာ မဟုတျပဲ ” ထငျ ”ဆိုတဲ့ ဥပါဒါနျကွောငျ့သာ နိမျ့သှားတယျလို့ထငျတာပါ …” ” ပိတျစတဈခုပဲဖွဈတဲ့ ထဘီလို နူးညံ့တဲ့ပိတျစ တဈခုဟာ သငျ့ကိုဘယျလိုမြားဒုက်ခရောကျစမေလဲ။ ဘုနျးနိမျ့တယျ ဆိုတာက သငျထငျသလိုမဟုတျပွနျဘူး။ “ဘုနျးနိမျ့ပွီဟဲ့”ဆိုတဲ့ သငျ့ရဲ့ ခံစားခကျြဟာ negative feeling ဘကျကိုရောကျသှားတယျ။ စိတျ အလိုမကဖြွဈစတေယျ။ စိတျကို နောကျကြိစတေယျ ၊ အဲဒါဟာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အရညျအသှေးကဆြငျးခွငျး ၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ဘုနျးနိမျ့ခွငျးပါပဲ ” ” ဒါဆို အရှငျဘုရားအနနေဲ့ ဝငျခဲ့မိရငျရော နိမျ့မှာလား ” ” အဓိပ်ပာယျမဲ့ … Read more
လေးစားပါတယ် ညီမလေး ရေ…….
လေးစားပါတယ် ညီမလေး ရေ……. မနေ့ကတော့ တကယ့်နေ့ပါပဲ ဘာနေ့လဲဆိုရင်စမ်းချောင်းမှာပိတ်မိတဲ့နေ့/ညပါ🤧 ၁၂:၃၀လောက်တည်းကပိတ်မိတာ မနက်၅:၃၀မှထပြန်ရတယ် ညနေတည်းပြန်ဖို့နည်းလမ်းပေါင်းစုံလုပ်ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့လို့ညအိပ်လိုက်ရတယ် အစကညဘက်ရောက်တာနဲ့ဧည့်စာရင်းစစ်ရင်း ဝင်ဆွဲမယ်လို့ကြားပေမယ့်မြို့နယ်တိုင်းကအပြင် ထွက်လာပြီးစမ်းချောင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့လူ​တွေအတွက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပေးကြလို့သက်သာသွားတယ် အားလုံးကိုကျေးဇူးတွေထိုင်တင်နေရတယ် ပုန်းဖို့လက်ခံပေးတဲ့အိမ်တွေရော လူတွေရော အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် တစ်ညလုံးကင်းထိုင်စောင့်ပြီးမနက်လင်းတာနဲ့ ပြန်ထွက်လို့ရမရအကြောင်းကြားပေးတဲ့သူတွေရော ပြန်လိုက်ပို့ပေးတဲ့ Free Rideတွေရော အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါသည် အားလုံးရဲ့စည်းလုံးမှုကိုလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရတာ အရမ်းကိုအားရတာပဲ😍😍😍 ဒီတော်လှန်ရေးကိုနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ် နိုင်ကိုနိုင်ရမယ် အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်💪 Crd unicode လေးစားပါတယျ ညီမလေး ရေ……. မနကေ့တော့ တကယျ့နပေ့ါပဲ ဘာနလေဲ့ဆိုရငျစမျးခြောငျးမှာပိတျမိတဲ့နေ့/ညပါ🤧 ၁၂:၃ဝလောကျတညျးကပိတျမိတာ မနကျ၅:၃ဝမှထပွနျရတယျ ညနတေညျးပွနျဖို့နညျးလမျးပေါငျးစုံလုပျပမေယျ့ မအောငျမွငျခဲ့လို့ညအိပျလိုကျရတယျ အစကညဘကျရောကျတာနဲ့ဧညျ့စာရငျးစဈရငျး ဝငျဆှဲမယျလို့ကွားပမေယျ့မွို့နယျတိုငျးကအပွငျ ထှကျလာပွီးစမျးခြောငျးမှာပိတျမိနတေဲ့လူ​တှအေတှကျ ဆန်ဒဖျောထုတျပေးကွလို့သကျသာသှားတယျ အားလုံးကိုကြေးဇူးတှထေိုငျတငျနရေတယျ ပုနျးဖို့လကျခံပေးတဲ့အိမျတှရေော လူတှရေော အရမျးကိုကြေးဇူးတငျပါတယျ တဈညလုံးကငျးထိုငျစောငျ့ပွီးမနကျလငျးတာနဲ့ ပွနျထှကျလို့ရမရအကွောငျးကွားပေးတဲ့သူတှရေော ပွနျလိုကျပို့ပေးတဲ့ Free Rideတှရေော အမြားကွီးကြေးဇူးတငျပါသညျ … Read more